Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha laambadda UV | Shiinaha UV Factory laambad jeermiska
Isbitaalka gacanta lagu qaadan karo ...
Naqshad cusub 35W UV jeermiska ...
36W Germicidal UV iftiinka dis ...
Nalalka jeermiska nadiifinta ee ozone-ka ee jeermiga jeermiska
Ultraviolet ozone sterilization lamp oo leh 253.7nm UV ayaa isla markiiba baabiin kara fayraska (Covid-19), wuxuu kaloo baabiin karaa bakteeriyada iyo caarada, aamin iyo ku habboon, waxay kuu keenaysaa nolol caafimaad leh.
35W UVC Ozone Ultraviolet Germicidal Lamp Quartz Laydhka
Waxaan Kanfur u sameynaa nalalka UVC nadaafadda qolalka waaweyn, qolalka yar yar, iyo sagxadaha. Ku noolow nolol leh xakamaynta fayadhowrka. Wax soo saarka Germicidal UVC ee dadka iyo ganacsiyada si isku mid ah.
Jeermiska isbitaalka jeermiska jeermiga ee loo yaqaan 'Ultraviolet germicidal lamp'
36W / 60W UVC laambad Ozone leh kontoroolka fog ee Kanfur wuxuu dili karaa bakteeriyada, fayraska, caarada, waxay buuxin kartaa shuruudaha nadiifinta iyo jeermiska nolol maalmeedka waxayna ilaalin kartaa caafimaadka adiga iyo qoyskaaga.
36W / 60W UV laambadda jeermiska leh kontoroolka fog ee wireless
110 V / 220 UV laambadda jeermiska diilinta kumbuyuutarka ee darbijiifka dariiqa, waqtiga gorshada seddexaad, 15 seken oo dib u dhac ah ayaa bilaabaya inuu jirkaaga ilaaliyo. Ilayska jeermiska UV ozone, jeermiska-dhalista wareega oo dhan, ka fogow fayraska iyo bakteeriyada.
laambada nadiifinta ee ultraviolet-ka ee jeermiska qolka lagu nadiifiyo
Ilayska nadiifinta Ultraviolet wuxuu baabiin karaa bakteeriyada, fayraska iyo caarada, oo si ballaaran loogu adeegsado Guriga, Iskuulka, isbitaalka, Hoteelka, oo door muhiim ah ka ciyaara jeermiska nolosheena maalinlaha ah.
36W Portable 254nm Ozone UVv laambad jeermiska
Nalalka jeermiska dila jirka ee loo yaqaan 'UVC disinfection' wuxuu kaa caawiyaa dilka bakteeriyada, fayrasyada, xasaasiyadda, iyo caaryada si hufan. Waa hab fayadhowr bilaash ah oo kiimiko ah kaas oo jeermiska dilaa 360 ° si looga caawiyo abuuritaanka jawi badbaado leh oo sahlan.
36W Germicidal UV light jeermiska guriga
110V / 220V germicidal uv light oo ka timid Kanfur qorraxdu ha soo gasho qolka, oo ay ku jiraan shaqooyinka jeermiska, nadiifinta iyo caarada, waxay kuu keeneysaa jawi caafimaad qaba.
Naqshad cusub 35W UV nalka jeermiska loogu talagalay nadiifinta gudaha
Waxaan Kanfur kaliya naqshadeynay 35w UV nuurka jeermiska cusub, oo leh qaybta aluminium ee aluminium, qolofka ABS, UV iyo jeermiska laba jeer ee ozone, abuur jawi caafimaad oo guri.
Nalalka gacanta lagu qaato ee laambadda jeermiska jeermiga ee la iska qaado
35W UV la qaadan karo oo ah laambad nadiifin UV ah, UV xoog leh iyo Ozone oo laysku daro
nadiifi hawada iyo dusha qolka guriga dhexdiisa ama jawiga shaqada.